Islaayidii Pirezanteshiini keessatti sochii fakkina Wantootaa hojjachu - LibreOffice Help
Islaayidii Pirezanteshiini keessatti sochii fakkina Wantootaa hojjachu
Wantootaa islaayidii keetirraa jiraniif galteewwan sochii fakkina ammaa fayyadamu dandeessa.
1 Wantootaaf galteewwan sochii fakkina fayyadamuuf:
2 Galtee xurree sochii fayyadamu fi gulaaluufi:
3 Galtee sochii fakkinaa wanta tokko keessa haquuf:
Wantootaaf galteewwan sochii fakkina fayyadamuuf:
Islaayidii irraa mul'annoo Baratamoo keessaa, wantootaa sochii fakkina hojjachuuf barbaddu fili.
Agarsiisa islaayidii - Sochii Fakkinaa Baratamoo fili, Dabali cuqaasi, kana booda galtee sochii fakkina fili.
Qaaqa Sochii Fakkina Baratamo keessati akaakuu galteewani keessaa filachuuf, cancaala fuulaa cuqaasi. Galtee cuqaasi, kana booda TOLEcuqaasi.
Sochii fakkinaa durargisiisuuf qabduu Taphachiisi cuqaasi.
Galtee xurree sochii fayyadamu fi gulaaluufi:
Xurree sochii waliin socho'uuf wanti tokko sochii fakkinaatiin socho'u danda'a durmurtaawaa ykn turreewwan sochii ofireeti fayyadamuu dandeessa.
Yoo”qonyoo”, “rogaddee” ykn “sarara unka akka feetee filatte, qaaqni ni cufama. Yoo fakkasaan dhume fi haqamu baate, xurreen uumamee galmicha keessaa haqameetii akka xurree sochiitti saagama.
Xurreewwan Sochiitti Gulaaluu
Yoo moggaargiin sochii fakkinaa Baratamoo mul'ate, galteewwana xurreewwan sochii fakkinaa hundi akka ifaa ta'eti islaayidiirratti kaafama. Yeroo hunda xurreewwan hundii ni mul'atu, waan kana ta'eef, sochiiwwan fakkinaa xurreewwan walitti annan waliin kunneen haala salphaan uumamu danda'u.
Xurree sochii xurreerratti cuqaasuun filatamu danda'a. Xurreen filatame, kan itti socha'u fi akka bocaatti itti jijjiiramu qabannoota qabaata. Xurreerratti akka jalqabu taasiisa. Qaphxiin halata gulaali Gulaali - Qaphxiileedhaan ykn F8 dhiibuunis jalqabsiisuu ni danda'ama.
Galtee sochii fakkinaa wanta tokko keessa haquuf:
Mul'ana Baratamoo islaayidii keessaa jiruu irraa, wanticha galtee irraa haqu fili.
Agarsiisaa Islaayidii - Sochii Fakkina Baratamoo Fili.
Cehumsoota Islaayidii Fakkeessu
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.3/Impress/Animating_Objects_in_Presentation_Slides/om&oldid=925573"
This page was last edited 03:15:19, 2014-10-16 by LibreOffice Help user WikiSysop.